Mampiaraka amin'ny chat serasera
Mampiaraka amin’ny chat serasera
Noho izany Dia efa nanatevin-daharana ny karajia.
Ny iray hafa, ny mifanohitra amin’izany kosa, dia miezaka mafy ny hisarika ny saina amin’ny fanararaotana na tondra-drano, na wantonly nanararaotra ny mpihaino azy ary tsy ho ela, koa, ny ravina ny endriny, miaraka amin’ny fanampian’ny ny mpandrindra. Ny fahatelo dia tafintohina mahatsiravina mankaleo, ny heviny, ny orinasa izay mitaraina momba ny dokam-barotra, zava-poana nampanantena azy tsara ny resaka ho an’ny voly sy mahazo na inona na inona, fa manerana izao rehetra izao ny fahafaham-baraka.
NY FITSIPI-PITONDRANTENA ARY NY FAMPIHARANA NY CHAT-PIFANDRAISANA: SOSO-KEVITRA HO AN’NY BEGINNERS.
Ireto misy soso-kevitra tsotra izay afaka manampy ny newbie karajia sy ny Mampiaraka.
Tsy hanipy any amin’ny endriny ho toy ny lohany amin’ny dobo. Jereo ny fotoana eo amin’ny strip chat tsy hiditra ao. Rehetra chat manana ny»rivo-piainana»miezaka hisambotra. Tsara tarehy tsy ho ela Ianareo dia ho afaka ny hahazo an-tsaina ny mety ho natao fanadihadiana mba hanombanana izay ny azy ireo no te-hifandray ary iza no tsy»mafy»na ho uninteresting.
Maka kely ny ezaka mieritrereta tsara anaram-bositra. Ny vokatra dia tena tsy mandoa vola intsony. Nick, dia tsara ny manana tany am-boalohany, ary miaraka amin’izay koa, mafana, tantaram-pitiavana, saro-pantarina na mangatsiatsiaka. Dia ho tsara raha nick dia te-hanontany ny fanontaniana nahoana no nisafidy izany. Miaraka izany fanontaniana izany ao an-chat manomboka maro manana fifandraisana ny fifandraisana. Ohatra, izaho dia nampijaliana izy mba haneho hevitra mikasika ny fanontaniana mahaliana ny ankizivavy dia tena ratsy toy izany Robin ary nahoana, raha ny marina, fa ny ratsy.
Tsy mahalala fomba, manelingelina, tsy misy dikany nick mety hanohintohina mafy ny toerana misy ny fifandraisana. Hahatakatra: ho Anao, ny olona mijery nick, ara-tsaina ary nanonona izany. Voafidy ho chat tsara nick mandrisika ny fifandraisana fotsiny satria ny interlocutor dia ny fahafinaretana hoy ny teny mahafinaritra. Ny anarana toy ny»Bobby»tsy ho ela reraka mba hiverina. Vakio bebe kokoa ny momba ny anaran ny chat eto.
Mba hanam-paharetana. Miezaka tsy fahasorenana mba hanaiky ny zava-misy fa mbola»izany dia tsy fantatra mazava izay», nefa ny ankamaroan’ireo mpandray anjara mahafantatra ny tsirairay, niady hevitra be dia be ny fotoana. Eto Ianao manokana dia tokony hanokana fotoana ho an Andriamanitra no mahalala izay, fa tsy manan-danja ny fifandraisana amin’ny namana tsara. Inoana, angamba izany fa raha tsy izany»dia olona tsy fantatra»marina ianao, ny maso dia haneho ny tenany ho tena mahaliana ny olona.
Hanome ohatra ny marina tetika ny fifandraisana. Tsy fanafihana avy tranainy chat, ary mijery ny tonga vao tonga. Valiny fiarahabana, miezaka miresaka. Izay vao tonga, dia ho Anao ny fankasitrahana azy be indrindra mpiara-mitory amin’ny chat. Satria izy ireo bebe kokoa»maitso», sa tsy izany.) Midika izany fa Tsy ho azy ireo ny kely»efa hatry», izay izy ireo dia vonona ny hanaraka ny fifanakalozan-kevitra. Alamino ny faribolana ny olom-pantany. Nandry ny karatra tsy miankina amin’ny fifandraisana amin’ny toe-ny karajia: manao hatsikana, manao voahevitra fanehoan-kevitra. Ela na ho haingana ho tonga saina ireo»misotro ronono». Ho azo antoka izy ireo mahita Anao ho toy ny tsara conversationalist ao amin’ny chat mandrakariva amin’ny fangatahana.
Ary indro misy soso-kevitra amin’ny zavatra tsy tokony atao.
Aza manolotra ny hanambara»ny misterin ny vehivavy». Izany unpretentious vazivazy nivazivazy arivo heny. Izany dia ny raharaham-barotra karatra ny olona tery saina, afaka mahafantatra ihany no nitsilany teo ambonin’ny»ny zavatra hitako fa mihira aho».
Tsy mandray anjara amin’ny demonstrative hitaraindraina, raha toa ka tsy manana vola ampy saina. Izany ihany no hanimba ny hevitry ny tenanao. Mbola ilay hazo oak ny fianjerana any amin’ny mahazatra ny olona mba hahatsapa ny faniriana mba hanala ny fahasorenana ny voalohany olon-kafa. Matetika ny olona, fa kosa, ny mankasitraka ireo izay hampifalifaly ny tenany.
Ny karajia dia manome maimaim-poana amin’ny aterineto mifampiresaka tsy misy fisoratana anarana. Ny antony interpretiruya raha ny marina izany dia araka ny fitsipika feno fandeferana.
Izany no tena ratsy
Izahay mino tanteraka fa izay chat no natao ho an’ny fifandraisana, fa tsy ho an’ny tsy manam-petra maneho hevitra. Ny fifandraisana tsy misy fisoratana anarana dia midika ho fitondrana ny maimaim-poana ny fidirana tsy misy fombafomba. Na izany aza, ny tena maha-chat serasera dia iharan’ny fitsipikaizay dia tsara ny mahita. Raha tsy manitsakitsaka ny fitsipika, ny moderators mety hametraka sazy, avy fampitandremana ny fanesorana.
Raha»ratsy indrindra nitranga»Ianao no nesorina, dia antonony fahamendrehana»hanompo ny fotoana», hoy izy niverina tsy very ny tavako. Ny olona sasany dia miezaka foana mba hahazo ny alalan ny chat, mitaraina ny mpandrindra, ny fanompana azy ireo, brawl, miantso ny fiaraha-miory ho an’ny daholobe. Na izany aza, afaka manome toky manan-tsaina»lehilahy»karazana fitondran-tena tamin’ny vehivavy, chat dia sarobidy betsaka kokoa tantrums toy ny vehivavy. Tsy misy dikany mba hitondra voninahitra ho an’ny toy izany madio raha mikasa ny mbola ho avy ny firesahana amin’ny, ary hanohy hiresaka.
Satria isika eo amin’ny mpandrindra, fa tokony ho fantany fa ny firesahana amin’ny tantara naharitra teo dia nametraka ny holafitry ny mpamono olona. Tsy ilaina manelingelina mba hilaza ny momba ny mpitantana ny vady sahaza ho amin’izany asa tanana. Fomba fanao fa ny mpitantana ny tenany dia ny hevitry ny mpitsidika ary dia toy izany no manolotra ny antoko manokana mba hanampy amin’ny fitandroana ny filaminana.
Maro ny olona tao amin’ny chat aogositra, avy ao amin’ny, gaga aho fa misy afa-tsy vitsy dia vitsy ny mpitsidika efa hahazo»ireo tombontsoa sy»ny andian-teny ny torohevitra output, ny sata, ny misompirana ny loko anarana, ny endri-tsoratra, sary masina. Izany dia ny fomban-drazana ny amin’ny chat. Fitantanana zht kahihitra amin’ny tombontsoa, noho izany dia mihevitra fa ny firesahana ny tokony tena tsara ny lahatsoratra. Ianao koa dia mahaliana kokoa mba hihaona sy hiresaka amin’ny olona iray noho ny mahita ny loko ny spectrum dia nandoko ny andian-teny hoe, sa tsy izany. Noho izany, ny sonia, tsy maika mba hifandray ny mpitantana ho an’ny tombontsoany. Ny fanomezana tombontsoa dia voavaha toy ny resaka fanendrena moderators ny fanapahan-kevitry ny mpitantana ny fototry ny fantatra ny antony.
Fa efa mihoatra na latsaka nanorim-ponenana any an-chat, efa nahita ny mpiara-miombon’antoka ho an’ny fifandraisana, izay aho dia te-hiresaka bebe, kokoa tete-a-tete. Noho izany antony izany dia misy ny»mombamomba ny tena amin’ny»ny fomba fifandraisana, raha ny ankapobeny kasety azo nafenina avy amin’ny hafa miresaka fehezan-teny. Na izany aza, noho ny resaka ity, dia tokony ho fantatrao fa ny olona hafa koa dia te-hampita Aminareo ny fahatokiana avy amin’ny olon-kafa. Rehefa dinihina tokoa,»mombamomba ny tena»ny manokana toerana izay misy ny olona te-hahita ny olona voafidy. Dia afaka miezaka ny hifandray amin’ny loharanom-baovao ao amin’ny olona sy hijerena ny fanehoan-kevitra. Raha izy no hamaly toy izany koa dia ny zavatra rehetra dia OK. Raha mangataka»fivoahana avy amin’ny tena manokana fanontaniana»na»ajanony ny mibitsibitsika»noho izany, indrisy, tsy hitranga. Avy eo dia, ahoana no mba hanatanteraka ny fangatahana ary tsy hametraka mihitsy.
Izany afa-tsy ny malaza indrindra toro-hevitra avy amin’ny zavatra niainany ny fifandraisana eo amin’ny chat. Izy ireo dia ilaina ho an’ny beginners tamin’ny voalohany, ary dia hanampy mba mahazo mahita ny karajia»Vehivavy ny zava-Miafina»
← Tsara indrindra mampiaraka toerana ho an'ny vehivavy
Fanombanana ny tsara indrindra ny fomba sy toerana ny olom-pantany: aiza ny hihaona olona tsara. Frau im Fironana →